:Bọchị: February 11, 2020
Ndị bi na Erzincan agaghịzi ajụ oyi na bọs na-akwụsị
Emechila ọnụ nke ikuku emechiri emechi nke Erzincan Municipality enyerela ụmụ amaala nọ n'akụkụ dị iche iche nke obodo. E tinyere ebe nkwụsị bọs kwụsịrị ọhụrụ na Halit Paşa Street. Stopsmụ amaala na-akwụsị ikuku oyi [More ...]
Ngwa Parkomat gara Ndụ na Mersin
Emechara nkwadebe maka ngwa Parkomat, nke Kọmịshọn nke Multin Metropolitan Municipal Vahap Seçer kwupụtara, nke ụmụ amaala kwupụtara iji kpochapụ nsogbu na ịchọta ebe a na-adọba ụgbọala. Febụwarị [More ...]
Ndị otu ịgba bọọlụ Salcano Sakarya batara oge ọhụụ dịka oke mmiri
Ndị na-agba ịnyịnya ígwè n’obodo ukwu ahụ abanyela oge ọhụụ dịka oke mmiri. N’egwuregwu atọ mbụ nke oge ọhụrụ, ndị Metropolitan Bicycle Team, nke meriri goolu atọ, ọla ọcha atọ na 3 ọla nchara ma ghara ịbanye na bench ahụ, bụkwa mba ofesi. [More ...]
TÜVASAŞ nwere ike iwepụta ụgbọ ala ebubatala
Turkey Kamu-Sen President Önder Kahveci, ọ sịrị TÜVASAŞ agaghịkwa ike nke na-amị okporo ígwè ụgbọala na na-dị site ná mba ọzọ na na shei mebiri. Turkey Kamu-Sen President Önder Kahveci, na Turkish Transportation-Ị [More ...]
Channel Canza EIA Positive Report kagbuo
Pịa na February 11, 2020 site n'aka Onye isi oche TMMOB bụ Emin Koramaz banyere usoro iwu nke Ministry of Environment na Urbanization bidoro na mkpebi EIA Ezi mkpebi banyere Kanal Istanbul Project [More ...]
Bursa Teleferik AŞ mara ọkwa na ụgbọ elu ahụ ga-amalite ọzọ na 14.30 ka ikuku na-alaghachi na nkịtị. Cargbọ ala USB, nke na-enye njem njem ọzọ n'etiti Bursa city na Uludag, enweghị ike iwu ya n'ụtụtụ, n'ihi mbelata mmetụta nke ikuku. [More ...]
Kedu ihe kpatara Haydarpaşa Station ga-esi nọrọ dị ka ọdụ ụgbọ oloko?
Kedu ihe kpatara Haydarpaşa Station ga-esi dị ka ọdụ, ọ bụghị ụlọ oriri na nkwari akụ, ebe ngosi nka, nnukwu ụlọ ahịa ma ọ bụ ihe ọ bụla? Anyị na-esi ọnwụ na arịrịọ a. Nnukwu isi anyị sitere na eziokwu ahụ bụ na Haydarpaşa Train Station abụghị ebe a na-eme egwuregwu. Ọzọkwa, ojiji nke Gar [More ...]
Obodo Melikgazi gafere agafe ọkwa Karahöy Levelk
Maazị Melikgazi onye kwuru na aga-agafe agafe agafe n’ọdụ ụgbọ okporo ụzọ maka nchekwa na ụgbọ njem. Mustafa Palancıoğlu; Ka okporo ụzọ mmiri dị n’obodo na-adị ngwa, dị irè ma dịkwa nchebe, ọtụtụ n’ime obodo ahụ [More ...]
TURKSTAT: ldmụ nwanyị natara otu ụzọ n’ụzọ atọ nke ụlọ ndị erere
Na Turkey n'afọ 2019 1 348 729 ụlọ ahịa na-arụpụta agbanweela aka. Ọ bụ ezie na 57,5% ụlọ a na-ere bụ ụmụ nwoke na-ejikọ aka ọnụ, 31,2% bụ ụmụ nwanyị, 1,8% bụ ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị, 9,5% nọ na mpụga ndị a [More ...]
Nchicha Nkocha nke Nano na Tram na Bus na Kocaeli
Mgbe nje corona nke malitere na China ma kpatara oke ụjọ n'ụwa niile, nhicha nke ụgbọ njem na-apụtawanye elu. Ogige Transportgbọ njem, ebe nkezi otu narị puku mmadụ na-eme njem kwa ụbọchị na Kocaeli, [More ...]
TRNC na-ewebata Cargbọ ala ya GÜNSEL B9
Site na mba 20 maka akụkụ ndị a ga-eji rụọ ọrụ na "GÜNSEL", nke bụ ụgbọ ala ụlọ na nke mba anyị, ndị injinia Turkish kọwapụtara ụdị nke mbụ na B9 nke mbụ ga-ewebata B28. [More ...]
Prime Minista Johnson ga-akwado oru ngo maka ijeri ụgbọ elu 100 Billion Pound
Prime Minista Britain Boris Johnson na-akwado ịkwado nnukwu ụgbọ oloko a ga-ejikọ London na ugwu England, n'agbanyeghị mmegide ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ụgwọ mgbazigharị. Usoro ohuru a ga - abụ Britain na akụrụngwa akụrụngwa Europe. [More ...]
Gọọmentị agbachitere ndị mgbere ahụ na ọnụahịa ndenye aha High Speed ​​Train (YHT) site na okwu "a edozila ikpe na-ezighị ezi". Na-enyocha oke na-akwụ ụgwọ na tiketi tiketi ntinye akwụkwọ nke YHT, CHP Eskişehir Vice Utku Çakırözer kwuru, [More ...]
N’ọdụ ụgbọ elu atọ dị na Istanbul, ndị ọkachamara nyochara nchekwa ụgbọ elu: “Sabiha Gökçen bụ ụzọ nke abụọ.” [More ...]